संकल्प पूरा गर्ने समय : RajdhaniDaily.com sharethis
संकल्प पूरा गर्ने समय
जनकपुरधाम उपमहानगर मेयर जित्नुअघि नै मनोजकुमार साह कुचो लिएर जानकी मन्दिर पुगेका थिए । टोलीसहित घण्टौं सफाइ गरे । मन्दिर सफाइ गरेको तीन दिनपछि उनलाई मेयर घोषणा गरियो ।
‘राम कथाका सबैभन्दा ठूलो कथाबाचक मोरारी बापू जनकपुरधाम आउनुभएको थियो । मन्दिर फोहोर देखेपछि सफाइ गर्नबाट म आफूलाई रोक्न सकिन“,’ नवनिर्वाचित मेयर साह भन्छन् ।
यसअघि, मेयर लालकिशोर साह थिए । उनको प्राथमिकतामा सफाइ थिएन । फोटो खिचाउनमात्रै उनी कहिलेकाही“ कुचो हाथमा लिन्थे । यतिसम्म कि लालकिशोरले मेयर निर्वाचित हुनेबितिकै डेढ करोडको आफू चढ्ने गाडी किने ।
‘गाडी किन्नमा लाग्दिन“, मेरो प्राथमिकता जनकपुरधामको मूल समस्या सम्बोधन गर्नु हो,’ नवनिर्वाचित मेयर साह भन्छन्् ।
शपथग्रहण गरेकै दिन उनले सफाइ कार्य आफ्नो वडाबाट गर्ने औपचारिक निर्णय गरेका छन् ।
‘यो मेयर केही अठोट लिएर आएजस्तो भान भइरहेको छ,’ राजनीतिका जानकारसमेत रहेका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक एसएन झाको विश्लेषण छ । ‘जनकपुरधामको सफाइ, लाइन्डफिल्ड साइट र भ्रष्टाचार यसपटकको चुनावको प्रमुख मुद्दा थियो, यसलाई इमान्दारीपूर्वक अघि बढायो भनेमात्रै सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ जनकपुरधाम वडा ३ अध्यक्ष दिपेन्द्र साह भन्छन््, ‘जनकपुरधाम धार्मिक पर्यटनको केन्द्र हो, देश–विदेशका लाखौं व्यक्ति आउँछन्, फोहर देखेपछि खराब सन्देश जाने गरेको छ, सबैभन्दा बढी बजेट सफाइमा राखौं, नगर सफासुग्घर बनाऊ, मैले मेयरलाई भेटेर यही सल्लाह दिएको छु ।’
नेतृत्व उत्पत्ति कुन प्रकारले हुन्छ ? यस सम्बन्धमा कति विचारधारा छन् । समाजमा केही व्यक्ति यस्ता पनि हुन्छन््, जो जन्मजात यही योग्यता नेतृत्व लिएर जन्मिएका हुन्छन्् । दोस्रोतर्फ केही मनोवैज्ञानिक विचार छन्, नेताको उत्पत्ति परिस्थिति विशेषमा हुन्छन्् र सबै उसलाई नै नेता स्वीकार गर्छन् । स्थानीय तह चुनावमा यस्तै परिस्थति भएका नेता आएका छन् ।
धनुषा नगराइनबाट मेयर निर्वाचित विनय यादव इ“टा व्यवसायी थिए । नगराइनका यसअघिका मेयरको कामकाजलाई लिएर आलोचना भइरहेको थियो । त्यसैबेला विनयको नाम कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले अघि सारे र पहिलो चुनावमै उनले जीत हासिल गरे ।
‘नगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी प्रमुख समस्या रहेको छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने काम अगाडि बढाएको छु,’ नवनिर्वाचित मेयर यादव भन्छन् ।
धनुषा शहीदनगर नगरपालिकालाई नचिन्ने व्यक्ति कमै होलान् † २०४६ सालको आन्दोलनमा ६ शहीद भएका थिए । प्रजातन्त्रवादीका लागि यो तीर्थस्थलजस्तै हो ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा कयौंपटक यहाँ पुगेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समेत यहाँ पुगिसके । यो नगरपालिकामा यसपटक जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट दिनेश यादव निर्वाचित भएका छन् । ‘पाँच वर्षको समयलाई म धेरै मान्दिन“, मूल समस्या प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाइसकेको छु,’ मेयर यादव भन्छन् ।
जनकपुरधाम आउने पर्यटकलाई ‘शहीदनगरसम्म कसरी ल्याउन सकिन्छ ? बाटोघाटो सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा राखेको उनको कथन छ । नगरपालिकामा वृक्षारोपण अभियान विशेष रूपले चलाइने उनी बताउँछन् ।
नयाँ नेतृत्व फेरिँदैमा स्वभाव फेरिँदैन । सोच फेरिएन भने विकास अनुभूति गर्न सकिन्न । सकारात्मक सोच विकास गरेमा हामी समृद्धि भएको देख्छौं, जतिबेला पनि नकारात्मक सोच विकास भए समृद्धि पक्कै देख्दैनौं । सकारात्मक, नयाँ सोच, ज्ञान, ऊर्जा, संकल्प, योजना, नयाँ थालनी र नयाँ जीवनशैली विकास गर्ने प्रेरणा जाग्न सक्यो भनेमात्र नयाँ नेतृत्वले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।
नेतृत्व पंक्ति भ्रष्टाचारमा लिप्त भए समृद्ध बन्न सक्दैन । लोभलालच नगरी जनताप्रति बफादार भई अगाडि बढेमा मुलुक समृद्ध बन्न सक्ने छ तर यसअघिका स्थानीय तह जनप्रतिनिधिको कामकाज नियाल्दा भ्रष्टाचार चरममा देखिन्छ । विकासभन्दा सवारीसाधन किन्न र सुविधाभोगमै तल्लीन देखिन्थे ।
भ्रष्टाचारकै कारण देशमा ठूला व्यक्तिमा नराम्रो असर परेको छ । समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि नेतृत्वले लोभ–लालचमाथि विजय प्राप्त गर्नसक्नुपर्छ । परिस्थिति होइन, मनस्थिति अनुकूल बनाउने र शारीरिक रूपमा स्वस्थ र मस्त रहने कोशिश गर्ने व्यक्तिको जीवन नै उत्कृष्ट बित्छ ।
जति धनी भए पनि लोभलालच गरिरहने मानिसको जीवन सुखमय कदापि बन्न सक्दैन । उसलाई सधैंभर पैसाकै पिरलो हुन्छ, केही कुरामात्र ख्याल ग¥यौं र आफैंले त्यसलाई व्यवहारमा लागू ग¥यौं भने जीवन धन्य भएको अनुभूति गर्नेछौं ।
धनुषा मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका अध्यक्षमा जसपाका उम्मेदवार जयकुमार यादव विजयी भए । उनले जनतालाई सुविधा दिन ६ महिनाअघिदेखि नै रोडम्याप बनाएका थिए । अब कार्य अगाडि बढाइने उनी बताउँछन् ।
‘समृद्धि हाम्रो आचरण र जीवनशैली बन्नुपर्छ, कामभन्दा पनि कताबाट ठग्न सकिन्छ’ भन्ने नियत भएका मानिस, जीवनलाई बर्बाद बनाउँदै ‘जुवातास खेल्ने, मद्यपान, धूमपान गर्ने, अर्थहीन राजनीति गर्ने, आफूले पनि नगर्ने अरूले गरेको पनि देख्न नचाहने, अनैतिक व्यवहार गर्ने, श्रमलाई ठगेर खाने व्यक्ति सकारात्मक काममा लागून्’ भन्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्नेमा जनताको जोड छ ।
‘जनताको सबैभन्दा नजिक भएर जनप्रतिनिधि नै काम गर्ने गर्छन्, स्थानीय तह पहिलो निकाय भएकाले उसको सफलतामा जनताको विकास लुकको हुन्छ,’ सांसद रामअशिष यादव भन्छन् ।
लिंविग्स्टनकअनुसार नेतृत्वको आशय त्यो योग्यतासँग हुन्छ, जसमा अन्य व्यक्तिमा एउटा सामाजिक उद्देश्य अनुशरण गर्ने इच्छा जागृत हुन्छ ।
आर्डवे टीडका अनुसार ‘नेतृत्व त्यो गुणको संयोगको नाम हो, जसलाई राख्दा कुनै व्यक्ति अन्यसँग काम लिन योग्य हुन्छन्, विशेषगरी त्यसको प्रभावद्वारा अन्य व्यक्ति स्वेच्छाले कार्य गर्नका लागि तयार भइहाल्छ ।’
जनता धेरै विश्वास गरी कसैलाई जिताउँछन् तर धेरै त्यो विश्वासको कदर गर्दैनन् । जो कदर गर्दैनन्, अगाडी बढ्न सक्दैनन् । विश्वास नतोड्नेहरू नै उच्चतहमा पुगेको इतिहास छ ।
जनता केन्द्रविन्दुमा राखेर आर्थिक क्रान्तिको बाटोबाट देशलाई समृद्धि मार्गमा अगाडि बढाउने काम स्थानीय तहबाट हुनसक्छ । प्रजातन्त्रका मूल आधार स्तम्भ जनता नै हुन् । तर, अहिले जनताका रूपमा नभएर जातजाति, लिंग, वर्ण, पेसा, व्यवसायका रूपमा विभाजित हुनु दुखद् हो । यो विभाजनलाई राजनीतिक दर्शन र जनताप्रति विकासको प्रतिबद्धताले मात्र जोड्न सक्छ । यसका लागि फुटेर होइन, जुटेर अघि बढ्नुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक विचारधारा र मूल्य पद्दतिबाट मात्र मुलुकमा सुशासन र विकास सम्भव छ । इतिहासमा ‘म र मेरो’ भन्नेहरू हराएर गएका छन्, ‘हामी र हाम्रो’ भन्नेले नयाँ इतिहास रचेका छन् । त्यसैले जनताले दिएको गहनतम जिम्मेवारी एवं नयाँ इतिहास बनाउन नयाँ सोच, विचार र नयाँ अठोटसाथ स्थानीय तह जनप्रतिनिधि अग्रपंक्तिमा उभिन जरुरी छ ।
‘सकारात्मक कामहरू सबैमा लागू होस्, विगतमा भएका सबै कमजोरी र गल्तीबाट पाठ सिकेर ती गल्ती नदोहोरिने संकल्प गर्नुपर्छ,’ राजनीतिकर्मी राजीव झाको सुझाव छ ।
नागरिकता विधेयक : राष्ट्रिय अखण्डतामा गम्भीर चुनौती
काठमाडौंमा हैजाका सक्रमित भेटिए
एमालेभित्रै ‘शकुनी, मिरजाफर र मिरकासिम’: ओली
युएईका राजपरिवारका सदस्यको औपचारिक कार्यक्रममा रोक
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असार १३, २०७९
निलकण्ठमा देउवा पक्षका ठकुरी निर्वाचित
एपीएफ अस्पतालले मनायो १७औं वार्षिकोत्सव
म्याग्दीको पर्यटकीय स्थल टोड्केबाट मौसम खुलेपछि शनिबार देखिएको धौलागिरी हिमालको मनोरम दृष्य । तस्वीर : कमल खत्री, रासस